Juventus iyo Bayern Munich oo isku haysta saxiixa Anthony Martial – Gool FM
Juventus iyo Bayern Munich oo isku haysta saxiixa Anthony Martial
Liibaan Fantastic April 17, 2018
(Manchester) 17 Abriil 2018 Weerar yahanka Manchester United ee Anthony Martial ayaa helaya dalabyo waa wayn oo ka soo kala gaaraya kooxaha ugu awooda badan yurub.
Anthony Martial ayaa ku guul daraystay inuu qanciyo tababare Jose Mourinho, mana uusan helin daqiiqado ku filan tan iyo markii uu kooxda qabtay tababaraha reer Portugal.
Juventus ayaa ka dhiganaysa bartilmaameed xoogan Anthony Martial si ay ugu buuxiso booska Mario Mandzukic kaas oo ka tagaya kooxda dhamaadka xiliciyaareed kaan sida ay baahisay La Gazzetta dello Sport.
Wakiilo ka socda kooxda reer talyaani ayaa wadahadalo xoog leh kula jira Anthony Martial si loogu qanciyo inuu u dhaqaaqo horyaalka talyaaniga.
Laakiin Juventus ayaa loolan culus kala kulmaysa kooxda Bayern Munich oo dhankeeda doonay saxiixa Anthony Martial, waxaana jira warar sheegaya in kooxda reer Jarmal ay hogaanka u hayso tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga reer France.
Marcos Alonso oo halis ugu jira in la ganaaxo kadib qaladkii uu ku galay Shane Long
Tababare Valverde oo caawa nasinaya ciyaartoy muhiim ah iyo sababta oo la ogaaday